धन र सत्ता हस्तान्तरण – Chitwan Post
यो संसारमा कसैले केही लिएर आएको होइन । खाली हात आएका हुन् र जन्मपश्चात् मात्रै धर्तीबाट कुनै प्रक्रिया अपनाएर बटुलेका हुन् । तर, अन्तिम सत्यचाहिँ के हो भने जन्मपश्चात् यो वा त्यो नामका चीजबीज जति पनि बटुलिएका हुन्छन् कुनै न कुनै दिन छाड्नैपर्छ वा कसैलाई दिनैपर्छ । नदिए पनि छाड्नैपर्छ । नदिए पनि छाड्नैपर्ने बाध्यता भएका कारण बुद्धि पु¥याएर कसै न कसैलाई हस्तान्तरण गर्दा नै कल्याण हुन्छ । धर्म वा कर्तव्य पालन जे भने पनि ठीक तरिकाले धन वा शक्ति हस्तान्तरणलाई धर्म भनिन्छ, कर्तव्य पालन भनिन्छ । अब फेरि अर्को सत्यचाहिँ के हो भने सबै मान्छेलाई धर्म पालन वा कर्तव्य पालनबारे जानकारी हुन्छ भन्ने होइन । कसैले धर्म वा कर्तव्य पालन गर्छन् त कसैले गर्दैनन् । पालना गर्नेले धन र शक्ति खुसीसाथ हस्तान्तरण गर्छ र नगर्नेले अलपत्र पारेर छाड्छ, हस्तान्तरण गर्न मान्दैन वा गर्दैन ।
मान्छेभन्दा पहिला भगवान्को कुरा गरौँ । भगवान्को रुपमा मानिएका श्रीराम मानवशरीरमा आएका थिए । राजाको छोराको रुपमा जन्मिएका उनको साथमा धन नहुने कुरै भएन । श्रीरामले शरीर पाएका थिए । धन र शक्ति पनि पाएका थिए । समय आयो । श्रीरामले सत्ता–शक्ति हस्तान्तरण गरे । धन हस्तान्तरण गरे । अन्तमा शरीर पनि छाडे । यसरी मान्छेको शरीर प्राप्त गरेका रामले कर्तव्य र धर्मको पालना गर्दै सम्पूर्ण चीज खुसीसाथ हस्तान्तरण गरे । भगवान्का रुपमा मानिएका श्रीकृष्णले पनि आफ्नो समय सकिएपछि सबंै चीज छाडे । अब मान्छेको कुरा गरौँ । हजारौँहजार वर्षअघिदेखि मान्छेहरु जन्मिएका छन् । जन्मिने क्रम रोकिएको छैन । जन्मिएकाहरु आआफ्नो आयु सकिएपछि मरेका छन् । यसरी जन्मिने र मर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । जन्मिनेहरु बाँच्दै, मर्दै गरेका छन् । कोही लामो समय बाँचेर मरेका छन् त कोही छोटो समय बाँचेर मरेका छन् । सबै चाहना पूरा हुन सक्ला तर मर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना आजसम्म कसैको पूरा भएको छैन । गरिब र मध्यम वर्गीय मान्छेहरु मरेका छन्, धनी र शक्तिशालीहरु पनि मृत्युको अगाडि हारेका छन्, अर्थात् मरेकै छन् । संसारमा गरिबहरु धेरै हुन्छन् । धेरैका चर्चा गरिसाध्य हुन्न । धनीहरुको संख्या कम हुन्छ, त्यसकारण थोरै संख्यामा हुने धनीहरुको चर्चा हुन्छ । सत्ता–शक्तिमा सबै मान्छे पुग्न सक्दैनन् । जो पुग्छ उसको चर्चा हुन्छ । यो कोणबाट हेर्दा संसारमा आजसम्म सबै धनी र शक्तिशालीहरुकै चर्चा हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
आजको अमेरिका धनी र धेरै शाक्तिशाली छ । तर, जतिसुकै शक्तिशाली र धनी किन नहोस् त्यो देशको सत्तामा बस्ने र धनीहरुले समेत धन र सत्ता–शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र गरेकै पनि छन् । अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले राष्ट्रपतिको कुर्सी हस्तान्तरण गरे । अहिले उनी यो भौतिक संसारमा छैनन् । रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपतिको कुर्सीमा उक्लिए । उनले पनि पद हस्तान्तरण गरे । उनी पनि यो धर्तीमा अहिले छैनन् । धेरै पुरानो कुरा नगरौँ । केही वर्षअघि अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपनि थिए । उनले सत्ता हस्तान्तरण गरे । बाराक ओबामाले पनि पद हस्तान्तरण गरे । अहिले डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रुपमा शासन गरिरहेका छन्, उनले पनि समय आएपछि त्यो पद अर्कालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, गर्नेछन् । दुनियाँभरिका शासकहरुले यही प्रकारले राजीखुसीले, हाँसीहाँसी, देशको कानुन र संविधानको पालना गर्दै सत्ता–शक्ति हस्तान्तरण गर्छन्, तर हाम्रो देश नेपालको हकमा सत्ता–शक्ति प्राप्ति र हस्तान्तरण प्रक्रिया अल्लि फरक देखिएको छ । सत्तामा उक्लिन पनि गाँजेमाँजे प्रक्रिया अपनाउने र सकेसम्म ओर्लिन वा हस्तान्तरण गर्न नमान्ने अवस्था देखिएको छ । होइन भने, एकपटक सत्तामा पुगेपछि अर्कोपटक त्यही पदको लागि मरिहत्ते गर्न नपर्ने हो ।
पहिलाको पुरानो नेपालमा राजाले शासन गर्ने चलन थियो । राजाहरु आफ्नो हातको सत्ता–शक्ति छोरालाई दिँदैनथे, अर्थात् बाबु मरेपछिमात्रै छोराले राजा हुन पाउने र शासनसत्ता हातमा लिने चलन थियो । पृथ्वीवीरविक्रम बितेपछिमात्रै त्रिभुवन राजा भएका थिए । त्रिभुवनको अन्त्यपछि महेन्द्र र महेन्द्रको निधनपश्चात् मात्र वीरेन्द्र राजा भएका थिए । तर, कुनै पनि राजाले आफू जिउँदो छँदैमा छोरालाई सत्ता सुम्पिने काम गरेका थिएनन् यद्यपि, राजाहरु औधी रोगी र अशक्त भइसक्थे । यसरी आफू अशक्त र कुनै पनि कोणबाट सक्षम नभएपछि पनि उ बेलाका राजाहरुले सत्ता–शक्ति आफ्नो उत्तराधिकारीहरुलाई हस्तान्तरण गरेका थिएनन् । अब राजाको कुरा बेग्लै भयो । जनताको छोराछोरी सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख हुने अवस्था आयो र पनि सत्ता–शक्ति सजिलोसँग र खुसीसाथ हस्तान्तरण गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको भनिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो देशको प्रधानमन्त्री भए । कार्यकारी अधिकार बोक्ने त्यो पद जनताको छोराले पाउनु चानचुने विषय होइन । प्रचण्ड दोस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्री भए । सबैले सजिलैसँग अनुमान गर्न सक्छन् कि उनी फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । तेस्रोपटक पनि उनले सिंहदरबारमा राखिएको त्यो कुर्सीलाई खुब लोभिएर हेरेका छन् । एकपटक हस्तान्तरण गरिसकेको त्यही पदका लागि लोभ गर्न पर्थेन तर कुन्नि किन हो, हिजोआज पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतिर फर्केर हेरेको खबर जनताको कानसम्म आइपुग्छ । अहिले उनी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुन् । अब तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए पनि फेरि भूतपूर्व हुनैपर्छ । अहिले भूतपूर्व भइसकेको व्यक्ति फेरि भूतपूर्व हुनैको लागि किन त्यो कुर्सीतिर कर्के नजर लाएर हेर्नु ? बुझिसाध्य छैन । अब अरु भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको पनि कुरा त्यही हो । डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छन् । कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् र यिनको आँखा पनि प्रत्येक दिन त्यही सिंहदरबारमा राखिएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतिर तानिएका छन् । आखिर किन ? यो प्रश्नको जवाफ यही हो कि यी सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीवाला कुर्सीमा उक्लिन चाहन्छन्, जब कि फेरि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भूतपूर्व त एकदिन हुनु नै छ । एकपटक अरुलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको त्यो पद पटकपटक प्राप्त गर्दा के नै रस प्राप्त हुन सक्ला ? आँखा चिम्लिएर गम्दा अनौठो लाग्छ । मनले नमानेरै होला, यदि मनले मान्दो हो त एकपटक प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगिसकेपछि फेरि त्यो पदमा उक्लिने चाहना पलाउँथेन होला ।
यसरी हेर्दा अरु देशका राजनीतिज्ञ र हाम्रो देशको राजनीतिज्ञमा अलिकति फरक देखिएको छ, पद प्राप्तिको मामलामा । अब फेरि ताज्जुब लाग्ने विषयचाहिँ के हो भने पद अस्थायी हो, शरीरसमेत नासवान् छ भन्ने कुरा नजानेका मान्छेहरु यी हुँदै होइनन्, किनकि सामान्य मान्छे त प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना बिरलै हुन्छ । यस्ता असाधारण चिन्तन–शक्तिवाला मान्छेहरु पनि किन अल्मलिन्छन्, गज्जब लाग्ने विषयचाहिँ यही भएको छ । पद हस्तान्तरण चाहेर वा नचाहेर गर्नैपर्छ भन्ने कुरा सामान्य नेपाली नागरिकले त थाहा पाउने विषय हो भने यस्ता होनहार व्यक्तित्वहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुरहरुलाई कसरी थाहा नभएको होला, सोच्दा बडेबडे विद्वान्हरुको दिमागसमेत खल्बलिन्छ ।
अब धनको पनि कुरा त्यही हो । जसले जति धन बटुलेर राखे पनि आखिर मृत्युपश्चात् एक कौडी पनि लिएर जान पाइने होइन भन्ने सत्य जान्दाजान्दै किन आफूलाई चाहिनेभन्दा ज्यादा धन थुपारेर अरुलाई बाँच्न अप्ठ्यारो पारिदिने ? आजको नेपाली समाजलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने प्रत्येक परिवारका मूलीहरुले धनजति आफ्नो मुट्ठीमा कब्जा गरेका छन् । आफूपछिका उत्तराधिकारीलाई धन परिचालनको तरिका सिकाएका छैनन्, जब कि आफ्नो उत्तराधिकारीलाई चाहेर वा नचाहेर कुनै न कुनै बेला कानुनी वा व्यावहारिकरुपले धन हस्तान्तरण गर्नैपर्छ । संसारमा आज जति पनि भौतिक चीजलाई धनको रुपमा स्वीकारिएको छ ती सबै चीज यही पृथ्वीमा थिए र भोलि पनि रहनेछन्, तर जीवित छँदा जजसले मेरो धन भन्यो, मृत्युपश्चात् छाडेर गयो र आज कसैले मेरो धन भनिरहेको छ । मेरो मेरो भन्ने छाड्ने, मेरो मेरो भन्ने छाड्ने गरिएको छ । यही मेरो भन्ने प्रक्रिया दोहोरिएको मात्रै छ, मेरो भन्नेहरु केही समयका लागि आए र गए ।
अहिले जजसले मेरो भनिरहेका छन्, आखिर फेरि त्यही धनलाई मेरो भन्न अर्को मान्छे आइपुग्छ । यसरी धन बटुल्ने र छाड्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया दोहोरिएको मात्रै हो । यो सत्य सबैले बुझ्न जरूरी छ । यदि यो सत्यलाई हरेक नेपाली नागरिकले मनन गर्न सक्ने हो भने आज नेपाल जुन टीठलाग्दो अवस्थामा छ, त्यो अवस्था बदलिन्छ । नयाँ अवस्था सिर्जना हुनेबित्तिकै नेपाली नागरिकहरुले सुख र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । यसका लागि अरु होइन, हरेक चीज नासवान् छ भन्ने सत्यलाई मनन गर्ने र धन र शक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने गुणको विकास गर्नुपर्छ । अति धन संग्रहवादी चिन्तन र पद हस्तान्तरण गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच सबैको लागि घातक हुन्छ । यत्ति बुझे पर्याप्त हुन्छ ।